Dowladda oo ka hadashay waqtiga xariga laga jarayo Jidka Muqdisho iyo Afgooye | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Dowladda oo ka hadashay waqtiga xariga laga jarayo Jidka Muqdisho iyo Afgooye
Dowladda oo ka hadashay waqtiga xariga laga jarayo Jidka Muqdisho iyo Afgooye
Wasiirka Wasaaradda Hawlaha Guud ee Xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Aadan Macalin (Soomaali) ayaa ka hadlay qorshaha lagu doonayo in lagu furo wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye oo haatan dhismaheeda uu marayo meel geba-gabo ah.
Wasiir Maxamed Soomaali oo la hadlay Telefashinka Qaranka ayaa marka hore waxaa uu sheegay in dowladda ay qorsheyneysay in la furo wadadaas bishii Febraayo ee sanadkaan 2021, hayeeshee waxaa uu qiray Wasiirka in sababo la xiriira dhinaca amniga dib ugu dhacday xarig jarta wadada.
Sidoo kale Wasiirka ayaa Carabka ku dhuftay in haatan dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose uu ay mareyso meel geba-gabo ah, uuna dhismaha gaaray ilaa Buundada Afgooye.
Isaga oo sii hadlaayay Wasiirka Wasaaradda Hawlaha Guud ee Xukuumadda xilgaarsiinta ayaa waxaa uu tilmaamay inay wadadaas ka jiraan dhibaatooyin adeg oo dhinaca amniga, hayeeshee inta ugu muhiimsaneyd shaqada la qorsheeyay la qabtay, isagoona shacabka ka dalbaday inay kala shaqeeyaan inta hartay.
Ugu dambeyn Wasiir Maxamed Aadan Macalin (Soomaali) ayaa shaaca ka qaaday in wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye si toos ah xariga looga jari doono muddo dhan 60 maalmood guhadood, sida uu qorshahu yahay, isla markaana dowladda rajeyneyso in la furo.
Si kastaba wadada isku xirta Magaalada Muqdisho iyo degmada Afooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa ka dhacay qaraxyo isugu jiray miino iyo kuwo Is-miidaamin ah oo Al-shabaab ay la beegsadeen Injineero Turki iyo Soomaali ah, sidoo kalena ay ku dhinteen qaraxyada Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Haramcad ee dowladda Federaalka Soomaaliya.
Maqaal horeLacagta Shillin Soomaaliga oo ka socon weyday gudaha Puntland
Maqaal XigaMidowga Yurub oo War kasoo saaray Doorashadii ka dhacday Somaliland